यस्ता छन् असल श्रीमतीमा हुनुपर्ने २० गुणहरु ! जानीराखौ |
यस्ता छन् असल श्रीमतीमा हुनुपर्ने २० गुणहरु ! जानीराखौ
२०७६, १ चैत्र शनिबार १९:२७ March 14, 2020 ताजा खबररोचक
काठमाडौं । भनिन्छ, श्रीमान श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । त्यसैले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । दम्पत्तीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि दुवै जनाले धेरै बिषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको निष्कर्षमा उल्लेख भएका श्रीमानका अगाडि श्रीमतीले गर्नु नहुने २० बुँदाहरु यस्ता छन् ।
१. श्रीमानलाई अरु पुरुषसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु ।२. आफ्नो मायालाई पैसासँग तुलना नगर्नु ।३. समुहमा रहँदा श्रीमानलाई पहिला जवाफ दिने मौका दिनु ।४. श्रीमानसँग ठूलो आवाजमा कहिल्यै नबोल्नु ।५. श्रीमानको साथीको बारेमा कहिल्यै नराम्रो नबोल्नु ।६. उसले तिमीसँग विहे गरेको भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सनु ।७. आफ्नो मुड अनुसार कहिल्यै कुरा नगर्नु ।८. कुनै दिन श्रीमान खाली हात घर आए, उसलाई गाली नगर्नु ।९. श्रीमानको पसिना ख्याल गर्नु ।१०. श्रीमानले चाहेको समयमा यौ’न सम्बन्ध राख्न तयार बन्नु किनभने पुरुषको लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ ।
११. से’क्स प्रस्ताव अ’स्वीकार गर्दै नगर्नु ।१२ . कहिल्यै पनि अरुलाई तिम्रो श्रीमानको ख्याल गर्नु नभन्नु ।१३. बच्चाको अगाडि कहिल्यै श्रीमानलाई गा’ली नगर्नु ।१४ . घरबाट बाहिर निस्कनु अघि श्रीमानको कपडा ख्याल गर्नु ।१५. आफ्नो साथीलाई श्रीमानको धेरै नजिक हुने मौका नदिनु ।१६. शौचालय गएको र लुगा लगाउने बेलामा धेरै हतार नगर्नु ।१७. श्रीमानको कमजोरी परिवार र साथीको अगाडि नखोल्नु ।१८. श्रीमानको अगाडि आफु धेरै व्यस्त नहुनु । उसलाई समय दिनु ।१९. श्रीमान र आफ्नो कामको तुलना नगर्नु ।२० . आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु ।